Iqela le-Ascott Sun: Ubuhlakani obutsha-kwaye kuthetha ntoni
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cinezela iZaziso » Iqela le-Ascott Sun: Ubuhlakani obutsha-kwaye kuthetha ntoni
Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • Cinezela iZaziso • Iindaba eziVuthayo zaseVietnam
Ngaba ukhankanyiwe kolu papasho, okanye unazo ezinye iinkcukacha zokongeza?
I-Ascott iya kulawula iiyunithi ezili-1,905 kuzo zontathu iindawo zokuhlala ezinendawo yokuhlala ngaphakathi kwiQela le-Sun leTay Ho View Complex eHanoi. Olu phuhliso ludibeneyo lwe iconic luya kuba luphawu lomhlaba omtsha waseVietnam, oguqula isibhakabhaka sedolophu kunye nokuvuselela indawo ekhethekileyo yedolophu yaseTay Ho. I-Ascott iza kwazisa ngohlobo lwayo lweCrest Collection eVietnam. Okwangoku ifumaneka eFrance kuphela, eli lixesha lokuqala Ingqokelela yeCrest iya kuqala e-Asiya, ibonelele iindwendwe ngamava awodwa okonwaba ngokudibanisa isimilo kunye nelifa lemveli. I-Ascott iya kwazisa utyikityo lwayo i-Ascott The Residence brand kunye nophawu lwayo olukhula ngokukhawuleza, iCitadines Aparthotel. I-Ascott Indawo yokuhlala inikezela iindwendwe ezibonayo amava awodwa kunye nawomntu ngelixa iCitadines Aparthotel inikezela ubhetyebhetye kunye nokusebenza kwendlu eneenkonzo kunye neenkonzo zehotele kunye namava anefuthe ekuhlaleni. Iindawo zokuhlala ezintathu ezinenkonzo kulindeleke ukuba zivulwe ngokwamanqanaba ukusuka kwi-1Q 2023.
Kumsitho wokutyikitya owenziwe phakathi kwe-Ascott kunye neQela leLanga, uMnu Kevin Goh, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba sokuLawulwa kwezeNdawo wathi: “Ukwenza intsebenziswano ngobuchule kunye nabadlali abakhokelayo kushishino kuyaqhubeka nokuba sisicwangciso-qhinga sokukhula sika-Ascott. Isinika ukufikelela okukhawulezileyo kwimibhobho yeeprojekthi ezisemgangathweni zokukhulisa ipotifoliyo yethu yehlabathi kunye nengeniso yethu yemirhumo ephindaphindwayo njengoko ivula kwaye izinza. Oku kuhambelana nesicwangciso sokukhanya seasethi se-CLI. Ubambiswano lobuchule be-Ascott kunye neQela leLanga ukulawula uphuhliso olukhulu lwendawo yokuhlala eVietnam ngeemveliso zethu ezintathu, zibonisa ukuzithemba kwabo kubuchwephesha behlabathi lika-Ascott kunye nodumo lwegama. Le projekthi iya kuba ngumboniso obalaseleyo weAcott wokubuk 'iindwendwe. Sikunye, sijonge phambili ekwaziseni ibhakhoni yokwakha entsha eVietnam, ukutsala iindwendwe zalapha nezamazwe aphesheya ukuba zifumane amakhaya azo kude nekhaya lethu. Ubuhlakani bethu buza kuvula nendlela yokuba i-Ascott isebenzisane kwiiprojekthi ezininzi zokulungiselela iSun Group kwixa elizayo. ”
U-Ms Nguyen Vu Quynh Anh, u-CEO, i-Sun Hospitality Group (SHG), uphawu lwe-Sun Group lokungenisa izihambi, uthe: “I-Sun Group kunye ne-SHG bayakuvuyela ukusebenzisana no-Ascott, enye yeenkampani ezihlala phambili ehlabathini, ukufezekisa umbono wethu we-Tay Ho View Zintsonkothile. Njengovulindlela kumzi-mveliso wokuhlala waseAsia Pacific, igama lika-Ascott lamanye amazwe kunye nenethiwekhi yindawo efanelekileyo yeprojekthi ekumgangatho wehlabathi. Ngamava eSun Group kunye namava e-SHG kuninzi lweeprojekthi zaseVietnam ezikumgangatho wehlabathi ezinje ngeInterContinental Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Hotel de la Coupole - MGallery (Sa Pa), njlnjl. Siqinisekile ukuba iTay Ho View Complex iya kuba luphawu lweli lizwe lwamva nje lokuthimba ingqalelo yomntu wonke. I-Tay Ho View Complex imiselwe ukuphinda ichaze imigangatho yokubuka iindwendwe esixekweni. Ngapha koko, le projekthi iza kukhuthaza ukukhula okuqhubekekayo koqoqosho lwaseHanoi, itsale ishishini kunye nabakhenkethi bokuzonwabisa esixekweni ngelixa ibonelela ngamathuba emisebenzi eluntwini. ”
Ukuhlala no-Ascott eTay Ho View Complex, eyona icon intsha yokwakha yaseHanoi
I-Tay Ho View Complex ikwisinye sezithili zeHanoi kwaye ikwicala leLake Lake edumileyo. Ukongeza kwi-Ascott's trio yeendawo zokuhlala ezinenkonzo, uphuhliso olumanyanisiweyo lukwanento yokwenza nentengiso. I-Tay Ho View Complex iya kujikelezwa ngoonozakuzaku abaninzi, amashishini, iivenkile kunye neendlela zokuthengisa. Iya kuba ecaleni kwe-Opera House eza kuvulwa kwixesha elizayo. Izithili zeshishini eliphakathi eHanoi eHoan Kiem, eMin Dinh naseBa Dinh, nakwisikhululo senqwelomoya i-Noi Bai International ziphakathi kwemizuzu engama-20 xa uhamba ngemoto.
I-Ascott Indawo yokuhlala iza kubonelela ngeeyunithi ezili-1,167 ezibandakanya iisuti, isitudiyo, igumbi lokulala elinye ukuya kweline kunye neeyunithi eziphindwe kabini, ngelixa iCitadines Apart'hotel iza kubonelela ngeeyunithi ezingama-710 ezibandakanya isitudiyo, igumbi lokulala elinye ukuya kweline kunye neeyunithi zeduplex. Ingqokelela yeCrest iya kubonelela ngeeyunithi ezingama-28 ezizodwa, ezibandakanya izindlu zokulala eziphindwe kabini nezine. Izixhobo ezikule mihlaba mithathu zibandakanya amagumbi okulala abahlali, igumbi lokufundela, kunye neendawo zokuzilolonga. Abahlali baya kuba nakho ukufikelela kwiindawo zokutyela ezikumgangatho ophezulu ngabapheki abaziinkwenkwezi baseMichelin okanye abaziwayo behlabathi abazisa iindwendwe kwi-adventure yokupheka. Kuyakubakho iklabhu kunye nesibhakabhaka esibekwe phezu kophuhliso oluhlanganisiweyo lweendwendwe eziphumayo emva kosuku olude kunye neziselo ezisayiniweyo zebha.
Ubukho buka-Ascott eVietnam
U-Ascott wenza i-foray yakhe yokuqala e-Vietnam kwiminyaka engama-27 eyadlulayo ngokuvulwa kweSomerset West Lake Hanoi. Namhlanje, i-Ascott yeyona ndawo inomnini-mhlaba omkhulu kwilizwe lonke. Kongezwe iindawo zokuhlala ezintathu zenkonzo, ipotifoliyo ka-Ascott eVietnam ineendawo zokulala ezingama-9,200 kwiindawo ezingaphezu kwama-30 kwiidolophu ezili-12 ezinjengeBinh Duong, Cam Ranh, Danang, Hai Phong, Halong, Hanoi, Ho Chi Minh Isixeko, Hoi An, Lao Cai, Nha Trang, Sa Pa kunye neVung Tau. NgoJuni ka-2021, ingxowa-mali yabucala ka-Ascott, i-Ascott Serviced Residence Global Fund, yafumana iyunithi eyi-364 yeyunithi iSomerset Metropolitan West Hanoi ekucwangciswe ukuba ivulwe ngo-2024.